यि रोगहरुका लागि तेजपात हुन्छ रामवा’ण सरह हुन्छ…हेर्नुहोस् । – yuwa Awaj
कार्तिक २१, २०७७ शुक्रबार 0
काठमाडौ : भर्खरै, एक रिपोर्ट बाहिर आयो कि मधुमेह रोगीहरु को’रोना संक्रम’णको छिटै शिकार हुन्छन् र यसको कारणले गर्दा उनीहरुको ज्या’न जाने प’नि जो’खिम बढ्छ।
यद्यपि मधुमेह पूर्ण रूपमा हटाउन सकिदैन, तर यो औ’षधि वा घरेलु उपचारहरू प्रयोग गरेर निश्चय पनि नि’यन्त्रण गर्न सकिन्छ। तेज पत्ताको प्रयोग पनि यी घरेलु उपचा’रहरूमा पर्छ। यसले मधुमेह बिरा’मीहरूलाई मात्र फाइदा गर्दैन तर यसका अन्य धेरै फाइदाहरू पनि छन्।
टाईप-२ मधुमेह बिरा’मीहरूका लागि तेज पत्ताको प्रयोग धेरै फाइदाजनक हुन्छ। यसले र’क्त चा’प सामान्य बनाइ राख्न मद्दत गर्छ। यसले मुटुलाई पनि फाइदा पुर्या’उँछ। त्यसकारण, मधु’मेहबाट पीडि’त व्यक्तिहरूले यसको प्रयोग गर्नु निकै लाभदायक हुन्छ।
तेज पत्ताको प्रयोग पाचन प्रणाली सम्बन्धि समस्याहरूको लागि धेरै फाइदाजनक हुन्छ। पेटका धेरै समस्याहरू हटाउनको लागि पनि यसले मद्दत पुर्या’उँछ। यसको प्रयोगले क’ब्जियत, एसि’डिटी जस्ता समस्याहरूलाई कम गर्न सक्छ। चियासँग पनि तेज पत्ता प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यदि तपाईं निन्द्राको समस्यासँग संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ भने, रातमा सुत्नु अघि पानामा तेज पत्ताको तेल मिलाएर पिउनुहोस्। यो पानी पिउनाले तपाईंलाई राम्रो नि’द्रा आउँछ।
तेज पत्तामा भि’टामिन-ए र भिटामिन-सी पाइन्छ, भिटामिन-एले हाम्रो आँखासँग सम्बन्धित समस्याहरूलाई हटाउछ। जबकि भिटामिन-सीले शरीरमा सेतो रक्त को’षहरूको संख्या कायम राख्न मद्दत गर्छ। सेता रक्त कोषहरूले शरीरको रोग प्रति’रोधात्मक शक्ति म’जबूत बनाउँछ।
चस्मा लगाउँदा नाकमा दाग बसेको छ भने यी उपाय अपनाउनुहोस् !
धेरै मानिसहरुको आँखा क’मजोर हुन्छ जसको कारण उनीहरुलाई चस्मा लगाउनु पर्छ। धेरै समय चस्माको प्रयोग गर्नाले नाकमा दाग देखा पर्छ, जुन देख्दा एकदम नराम्रो देखिन्छ। अनुहारमा चस्मा लगाएर दाग आएको छ भने यी घरेलु उपचारहरू प्रयोग गरी यी दा’गहरूबाट छुट’कारा पाउन सकिन्छ। घरेलु उप’चारको प्रयोगले नाकमा चस्माको दाग हटाउन सकिन्छ।
एलोभेरा जेल प्रयोग गरेर नाकको दाग हटाउन सकिन्छ। सबै भन्दा पहिले, एलो’भेरा जेल लिनुहोस् र यसले दाग भएको क्षेत्रमा हल्का हातले मालिश गर्नुहोस्। एलोभेरामा मोइ’स्चराइजिंग र एन्टी-एजिंग गुणहरू हुन्छन् जसले नाकमा रहेको दाग कम गर्छ।
नाकमा बसेका दागहरू कम गर्न आलु पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिले आलु लिनुहोस् र पिस्नुहोस्। आलुको रस निकालेर उक्त रस दागमा लगाउनुहोस्। १० देखि १५ को लागि छोड्नुहोस्। त्यसपछि पानीले अनुहार धुनुहोस्। नाकमा चस्मा लगाउँदा बनेका दाग कम हुनेछन्। आलुमा ब्लीचिंग गुण हुन्छ जसले गर्दा छालाका घा’उहरु कम हुन्छन्। चस्मा लगाउँदा भएको दाग आलुको रसले सजिलै हटाउन सकिन्छ।
कागतीको रस लिनुहोस्। कपासको सहायताले दाग भएको ठाउँमा कागतीको रस लगाउनुहोस्। १० देखि १५ मिनेट पछि चिसो पानीले अनुहार धुनुहोस्। कागतीको रसमा भिटामिन सी पाइन्छ साथै, एन्टिअ’क्सीडेन्ट पाइन्छ जसले अनुहार सफा राख्न मद्दत गर्छ। चस्मा लगाउँदा बनेको दाग हटाउन कागतीको रस धेरै प्रभावकारी हुन्छ।
महमा एन्टी-एलर्जीक, एन्टीअक्सी’डेन्ट गुणहरू हुन्छन् जुन छालामा रहेका दाग हटाउनको लागि निकै प्रभावकारी हुन्छ। पहिले एक चम्चा मह र एक चम्चा दुध लिनुहोस्। दुबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुहोस्। यो मि’श्रण अनुहारमा १५ मिनेटको लागि लगाएर चिसो पानीले अनुहार धुनुहोस्।
गुलाब जल छालाका लागि धेरै फाइ’दाजनक हुन्छ। नाकमा रहेको दाग हटाउन गुलाब जल प्रयोग गर्न सकिन्छ। अनुहारमा गुलाब जल प्रयोग गर्न, कपासमा गु’लाब जलको केहि थोपा राख्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई नाकमा दाग भएको भागमा लगाउनुहोस्। राति सुत्नु भन्दा पहिले गुलाब जल प्रयोग गर्नाले दाग कम हुनेछ।
Prevओलीको विकल्प प्रचण्ड होइन राजतन्त्र – नेता कमल थापा…हेर्नुहोस् ।
Nextमहान श्रीमानले अस्पतालमै मनाइदिए अनिताको जन्मदिन ! यस्तो बन्यो माहोल…हेर्नुहोस्। (भिडियो सहित)